UAlibaba wenze ingeniso enkulu ngoSuku lweeNgoma | Zonke iinkonzo ze-intanethi
U-Alibaba uthumele i-10 yezigidigidi zeedola kwiyure nje enye ngoSuku lweeNgoma
UAlibaba, isigebenga se-e-commerce, waphakamisa phantse i-10.000 yezigidigidi zeedola kwiyure yokuqala yentengiso yoSuku lweeNgoma, eyaqala ngeCawe. I-e-tailer, ekhokelwa nguJack Ma, ithumele intengiso ye-69 yezigidigidi ze-yuan, okanye i-9,92 yezigidigidi zeedola ukuba zichaneke, ngaphakathi kweyure yomsitho wentengiso. Le yi-21 yepesenti ephezulu kune-57 yezigidigidi ze-yuan ezazithengiswa ngu-Alibaba's Singles Day kwisaqendu sonyaka ophelileyo.
Intengiso ye Usuku lweAlbaba Singles Ivelise malunga ne-3 yeebhiliyoni zeedola kwimizuzu emihlanu yokuqala xa kuthengiswa izinto ezithengiswayo, ingxelo yeReuters yatsho. Intengiso yeeyure ezingama-24 yayifumene i-25 yezigidigidi zeedola kwintengiso kunyaka ophelileyo. Siyakwandisa!
Lo nyaka, IAlibaba ineempawu ezingama-180,000 ezidwelisiweyo ukuba abathengi bakhethe ngexesha leeyure ezingama-24 ezidlulileyo. IXiaomi kunye neApple babephakathi kweyona nto intle ngexesha lesigaba sokuqala sentengiso. Kufunyenwe ii-odolo zivela kwizixeko kwihlabathi liphela, ezinje ngeLos Angeles, iFrankfurt kunye neTokyo, zeemveliso ezisukela kwiinapukeni ukuya kwii-smartphones, utshilo u-IANS kwingxelo.
Oku kungenzeka ukuba ibe ngumnyhadala wokugqibela ka-Alibaba wokuthengisa ngo-Novemba kunye nomsunguli kunye nosihlalo uJack Ma. Inkampani ibhengeze ngoSeptemba kulo nyaka ukuba i-CEO yangoku, UDaniel Zhang uzakuthatha izintambo zokuba ngumongameli kunyaka ozayo.
Ngelixa ukukhula kwentengiso kuhlala kuzinzile, Izabelo zeAlibaba ziphantsi kweepesenti ezili-16 kulo nyaka phakathi kokungaqiniseki kwezoqoqosho okuvela kukungavisisani kwezorhwebo phakathi kwe China ne-United States, amazwe amabini angonwabanga ngamaxesha amnandi kubudlelwane bawo bezorhwebo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » U-Alibaba uthumele i-10 yezigidigidi zeedola kwiyure nje enye ngoSuku lweeNgoma
Kuya kubakho i-Samsung Galaxy S10 Lite, ezi ziimpawu zayo ezinokubakho
Ukunikezelwa kweXiaomi Mi 9 kubonakala kunye nokucaciswa kwayo kobuchwephesha